Manofa bisikileta any Bali " Journey-Assist - Endri-javatra. Conditions. vidin'ny
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Ny fanofana bisikileta ao Bali
Mampiavaka ny lalànan'ny fifamoivoizana
Fa maninona no bisikileta iray any Bali
Ny fanofana bisikileta. Vidin-javatra. Conditions.
Modely bisikileta malaza
Inona no hikaroka
Aiza no hanofa
Tobin-tsolika (tobin-tsolika) any Bali
Mandeha tsy misy fahazoan-dàlana
Fiara eo aoriana
Sazy. Ahoana no hisorohana?
Loza any Bali
Ny ankamaroan'ny lalana eto dia manana halavirana kely, raha ny fametahana bisikileta dia mety kokoa noho ny fiara. Izany dia tena mahatsapa indrindra any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe izay mety hisian'ny loza miraikitra amin'ny lozam-pifamoivoizana, ary koa eny an-dalambe any an-tendrombohitra, izay mandeha amin'ny lalana miadana ny kamiao.
Betsaka ny trano any Bali, indrindra fa eo akaikin'ny tanimbary, no eo amoron-dalana tery, noho izany, mandeha bisikileta fotsiny ary afaka mitondra azy ireo ianao.
Bali dia tsy nosy lehibe dia lehibe, noho izany, raha tsy mikasa ny handeha amin'ny morontsiraka iray manontolo ianao, dia mety ny bisikileta ho fampitaovana.
Ny fanofana bisikileta iray dia tena lafo lavitra noho ny manofa fiara. Ny bisikileta koa dia misy solika mora kokoa noho ny fiara.
Ny fanofana bisikileta. Vidin-javatra. toe-javatra
Ao Bali, azo atao ny manofa bisikileta miaraka amin'ny fandefasana manual, miaraka amina boaty semi-automatique, ary manofa scooter mandeha ho azy. Ny safidy farany dia ny malaza indrindra.
Ny vidin'ny fanofana bisikileta any Bali dia voafaritry ny vanim-potoana sy ny maodely. Matetika dia eo amin'ny 50 - 000 (80-000 $) isan'andro izany, na 4 Indonesia - 6 (700-000 $) isam-bolana isam-bolana ho an'ireo maodely mora indrindra. Amin'ny fanofana bisikileta mandritra ny herintaona indray mandeha dia misy ny fotoana ahazoana fihenam-bidy tsara.
Ny vidiny isaky ny tranga manokana dia miankina amin'ny toetran'ny bisikileta, ny teboka fanofana ary ny fepetra fanampiny. Tsy ampirisihina hiezaka ny hanana mora sy hitahiry $ 20 isam-bolana. Matetika amin'ny vidiny mora indrindra dia manofa fiara maotera "maty" tanteraka miaraka amina mileage goavambe izy ireo, izay miavaka amin'ny fihetsika tsy ampoizina amin'ny bibilava. Aleo mandoa vola kely kokoa miaraka amin'ny bisikileta azo antoka kokoa.
Tahirin-kevitra amin'ny fanofana bisikileta
Tsy mila carte de crédit ianao, fahazoan-dàlana mitondra fiara na antontan-taratasy hafa hanofa bisikileta any Bali. Mandritra ny toerana hofan-trano, ny nomerao an-tariby sy ny adiresy (na anaran'ny hotely) no hangatahana.
Tsy ilaina ihany koa ny fametrahana trano hofan-trano. Ny fomba fandoavam-bola dia tsy mitovy amin'ny teboka samihafa ary matetika resahina tsirairay. Indraindray mandoa ny antsasany aloha izy ireo, ary ny antsasany amin'ny fotoana itaterana azy, saingy matetika kokoa izy ireo dia mitaky ny vola feno mandritra ny iray volana indray mandeha (miaraka amin'ny hofan-trano isam-bolana). Tsy misy tokony hatahoranao manokana ny fandoavan-karama feno, kanefa, raha misy ny tsy fitovian-kevitra, dia haingana kokoa ny famahana ny olana, rehefa tsy voaloa hatramin'ny farany ny vola.
Ny Honda Vario no bisikileta mahazatra sy be mpampiasa indrindra any Bali, mety amin'ny mpitaingina sy ny fipetrahan'ny mpandeha, mora amin'ny naoty avo.
Ny Honda Scoopy dia mitovy amin'ny Vario, saingy manana endrika mihoapampana kokoa ary tian'ny vehivavy indrindra. Manana fifehezana tsy dia ahazoana aina, fa seza malefaka kokoa.
Suzuki Skywave - mitovy amin'ny Vario ihany koa ary mahazaka mpandeha roa aza, nefa tsy dia fahita firy.
Yamaha Mio - tsy dia nanana herinaratra kely akory noho ny maodely teo aloha, na izany aza, mety amin'ny fiara ihany ao anatin'ny fetra ao an-tanàna. Ny fiovaovana vaovao dia matanjaka kokoa, nefa koa tsy miely patrana.
Yamaha NMAX 155 - malaza be tato anatin'ny taona vitsivitsy, manavaka azy amin'ny hery, ny faharetana, ny fiononana, mety amin'ny dia lavitra. Somary sarotra ihany anefa ny fanodinana ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Yamaha Byson 150 dia karazana "hybrid" scooter sy moto. Izy io dia ambany fahefana, tsy misy toerana ho an'ny zavatra. Ny tombony lehibe dia ny famolavolana tsara tarehy.
Torohevitra hanofa bisikileta. inona no tadiavina
Soso-kevitra ny hisafidiananao bisikileta vaovao ary alao antoka fa tsy misy ny fahasimbana lehibe na ny gorodona lehibe alohan'ny hametrahana vola. Ny ankabeazan'ny bisikileta hofaina eto dia tsara toetra, saingy tsy tonga lafatra, noho io antony io, matetika dia tsy mahita lesoka amin'ireo rangotra kely ny tompon-trano rehefa manofa bisikileta. Na dia te-hamefy ny tenanao aza ianao dia mila manoratra momba ny fisian'ny gorodona na chips ao amin'ny fifanarahana, izay matetika dia toy ny taratasy tsy mitandrina. Ilaina ny maka sary ny fahasimbana na maka sary azy.
Ilaina ihany koa ny manamarina ny fisian'ny pasipaoro teknikan'ilay bisikileta. Matetika apetraka ao anaty vata ity antontan-taratasy ity. Indraindray dia mbola tsy eo izy, ary manofahofa tanana fotsiny ny tompony ary mandresy lahatra azy amin'ny fomban'ny "tsy maninona, tsy hisy olana izany, fa raha misy tampoka dia miantso ahy dia hamaha azy haingana aho." Raha ny fitsipika dia marina izany, na izany aza, mbola tsara kokoa ny hametrahana ny antontan-taratasy amin'ny toerany.
Tokony ho azonao antoka ihany koa ny amin'ny serivisy fitaovana maivana (lohany, fanodinana famantarana, jiro marefo), rafitra fanoratana, dashboard. Mampalahelo fa indraindray izy ireo dia manandrana manofa bisikileta misy nodes tsy mety.
Aiza no hanofa bisikileta iray ao Bali
Misy fomba roa hanofa mpivarotra bisikileta iray ao Bali.
Mora nefa sarotra
Ny safidy mora indrindra dia ny tonga any Bali, mankany amin'ny hotely, avy eo manao fikarohana momba ny faritra akaiky anao. Mila mahita ilay soratra hoe "Bisikileta hofan-trano" ianao, anontanio ny vidiny, misafidiana bisikileta mety, ary avy eo mifampiraharaha tsara.
Io safidy io dia mety raha maharitra iray volana mahery, na raha mitsitsy ho anao ny fitahirizana. Mampalahelo fa matetika dia sarotra ny mitady bisikileta am-pahombiazana, azo inoana ihany koa fa tsy misy fiantohana, ary mety mahamenatra ny tompony. Any Bali, ny fika fanaovana hosoka toy ny mitaky vola be amin'ny alàlan'ny fikorisana kely dia tsy dia mahazatra, fa indraindray dia mamihina ny tompony ihany ny bisikileta ary avy eo mitaky ny vidiny feno (toy ny vaovao).
Tsotra fa lafo
Tonga tany Bali ho mpizahantany vetivety (hatramin'ny iray volana), mora kokoa ny mandamina fanofana bisikileta mialoha. Ohatra, Balihelper dia manao fiaramanidina tsara ho an'ny bisikileta vaovao ankoatra ny fiarany. Nanome antoka feno ho an'ny bisikileta rehetra izy. Mandritra izany fotoana izany, ny bisikileta dia alefa manerana ny nosy (ohatra, dia azo atolotra amin'ny hotely na seranam-piara-manidina). Ny fiara mpitondra fiara rehetra dia tena voatahiry avokoa. Tsara indrindra ny hifandray amin'ity orinasa ity rehefa mila modely mavesatra na tsy fahita firy loatra ianao. Ny vidiny dia azo atao tsara ihany koa. Misy aza ny fanampiana amin'ny teny rosianina.
Tobin-tsolika any Bali (tobin-tsolika)
Ny tobin-tsolika iray any Bali amin'ny ankapobeny dia ampy, fa any amin'ny faritra sasany voafantina dia tsy ampy. Ny fitrandrahana entona ambony indrindra dia miseho amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Matetika dia hita eo amin'ny sisin'ny lalana lehibe izy ireo. Ao koa ny magazay mivarotra tavoahangy solika feno divay. Ireo tavoahangy ireo dia tena mety amin'ny tales. Ny vidin'ny solika dia 9 rupees any Indonezia.
Amin'ny tobin-tsolika iray, mazàna dia mora kokoa noho ny amin'ny fivarotana misy tavoahangy. Noho izany dia mahasoa kokoa raha izao ny mahita tobin-dasantsy ary mameno fitoeran-java-feno ao, ary ny fivarotana dia mety fotsiny rehefa saika tsy misy ny tanky ary tsy misy na dia iray aza ny tobin-tsolika feno hipoka.
Ao amin'ny tobin-tsolika Bali, karazan-tsolika roa no atolotra - lasantsy premium (fiampitana eo anelanelan'ny 92 sy 95) sy ny diesel Diesel. Ny tobim-pamenoana rehetra dia an'ny fanjakana, raikitra ny vidiny. Ny litera 1 litatra dia mitentina 8 Rupiah Indianina (000 $).
Ny lasantsy dia amidy amina magazay amoron-dàlana marobe, indraindray eny amin'ny fivarotana enta-mavesatra aza (raha ny mahazatra, manantona takelaka misy soratra Petrol na Bensin na Premium) izy ireo, amin'ny 8 - 000 rupees Indonezia isaky ny litatra. Ao anaty tavoahangy plastika sy vera no asiana tavoahangy eto. Na izany aza, mbola ampirisihina hampiasa tobin-tsolika ofisialy, izay azo itokisana sy mora vidy kokoa.
Ny salanisan-tsolika amin'ny salanisan'ny bisikileta dia 1 litatra isaky ny 30 km, fa ny zava-drehetra dia araky ny fahasimban'ny fiara, ny terrain ary ny fomba mitondra fiara. Ny bisikileta fandefasana manual dia somary mampanan-karena.
Ny ankamaroan'ny bisikileta any Bali dia manana maotera latsaky ny 100 cc. cm, noho izany, ny fitantanan'izy ireo dia mitaky ny zon'ny sokajy izay mifanitsy amin'ny fiara maotera. Ny zavatra tena mahaliana dia ny sokajy zon'ny zon'ny any Indonezia tsy mifanaraka amin'ny an'ny iraisam-pirenena. Ny sokajy A eto dia ny fiara, ny B dia kamio, ary ny C kosa ny maotera.
Angamba, ny polisy polisy misahana ny fifamoivoizana Indoneziana, rehefa manamarina ny fahazoan-dàlan'ny mpizahatany avy any amin'ny firenena eropeana sy Sovietika taloha, dia gaga amin'ireo mpamily kamio be dia be. Azo inoana koa fa noho io fisavoritahana io no mahatonga ny polisy eo an-toerana matetika tsy “mahita tsiny” amin'ny sokajy B an'ny mpamily bisikileta, raha tsy hoe iraisam-pirenena ireo zony ireo. Ny zom-pirenena (Rosiana, Okrainiana, hafa) any Indonezia dia tsy ekena (afa-tsy ny teratany indoneziana, mazava ho azy).
Ny zom-pirenena iraisam-pirenena dia azo avoaka any amin'ny firenenao any alohan'ny hiaingany any Bali. Ity tahirin-kevitra ity dia manan-kery mandritra ny 3 taona ary ekena amin'ny firenena rehetra miaraka amin'ireo nanao sonia ny fivorian'ny Firenena Mikambana (misy firenena 130 mahery).
Tahirin-kevitra ho an'ny fiara mpitondra fiara any Bali
Ny antontan-taratasy lehibe, ny fisian'izany dia tsy maintsy atao ho an'ny mpamily tsirairay (na eo an-toerana na avy any ivelany), dia ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny karazana fitaterana manokana, ny familiana izay kasaina.
Izany no antontan-taratasy any Bali, tahaka ny any an-kafa, izay mahaliana ny polisy fifamoivoizana eo an-toerana. Tian'izy ireo ny miafina any anaty kirihitrala, toa ny bisy amin'ny fifamoivoizana any amin'ireo firenena sovietika teo aloha, niseho tamin'ny fotoana tsy dia ilaina loatra. Noho izany, tokony hanana zon-jo miaraka aminao foana ianao.
Ary koa, alohan'ny hanofa fiara na bisikileta dia tandremo tsara raha hisavana antontan-taratasy momba izany. Ny birao fanofa dia tsy maintsy mamoaka pasipaoro fiara. Matetika ny mpanofa dia tsy miraharaha firy an'io, fa tsy dia mandika izany fepetra izany ny mpaninjara amin'ny alàlan'ny fametrahana ny TCP ao amin'ny efitrano glove an'ny fiara na ny "vatan'ny" bisikileta iray ao ambanin'ny seza.
Rosiana, Okrainiana ary fahazoan-dàlana hafa an'ny mpamily fiara any Indonezia, dia tsy manan-kery izany. Azo antoka fa tsy hisy olana amin'ny zo iraisam-pirenena fotsiny. Azo omena haingana haingana izany eo anatrehan'ny zon'ny firenena.
Fomba ahazoana zo iraisam-pirenena:
Alao mialoha ao amin'ny firenenao izy ireo alohan'ny handehanany any Indonezia.
Mifandraisa amina orinasa mpanelanelana izay afaka mandamina ny zo toy izany ho anao raha tsy mandray anjara mivantana.
Mamoaka ny zon'ny Indoneziana tsy maharitra. Navoaka mandritra ny 1 volana izy ireo. Ny bisikileta ihany anefa no afaka mitondra azy ireo miaraka.
Raha manana visa hiasa Kitas ianao dia afaka mangataka alalana tsy maharitra Indoneziana mandritra ny 1 taona, ahafahanao mitondra bisikileta sy fiara. Azonao atao ny manao azy io tsy mampiasa serivisy hafa.
Makà fahazoan-dàlana famerenam-panjakan'ny mpamaky eran-tany any Thailand (fa noho izany, mila mitsidika an'i Thailand ianao alohan'ny hitsidihana an'i Indonezia). Mihatra ny zo toy izany, afa-tsy amin'i Thailand sy Indonezia, ihany koa any Philippines, Vietnam, Singapore, Laos, Kambodza ary Malaysia (firenena ASEAN).
Azontsika atao ny manampy fa ny fisian'ny fahazoan-dàlana mpamily, izay ekena ao Indonezia, dia ahafahana manokatra kaonty any amin'ny banky Indoneziana.
Mikasika ny zon'ny Indoneziana vetivety nomena mandritra ny iray volana dia azo angonina any Bali izy ireo ao amin'ny biraon'ny polisy Poltabes any Denpasar. Mba hanaovana izany, tsy maintsy mametraka sary misy takelaka pasipaorinao sy pejinao visa, ary manoratra koa ny adiresin'ny fonenanao any Bali. Noho izany, tokony ho hitanao avy hatrany sy hahatadidy (tsara kokoa - soratanao) ny làlana an-dàlana sy trano (ary ny trano an-trano - raha trano fonenana) io, izay hanofa trano ao aminao. Manodidina ny 500 000 rupe Indoneziana ny vidin'ny zo toy izany.
Mandeha tsy misy fahazoan-dàlana mankany Bali
Ireo fomba rehetra ireo dia tsy ara-dalàna ary saika mampidi-doza hatrany, fa tena mahazatra amin'ny mpizaha tany.
Jereo ny toerana "ankafiziko" an'ireo mpitandro ny filaminana any Bali ary mandehana manodidina azy ireo.
Amin'ny tranga rehefa nosakanan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ianao dia afaka miombon-kevitra amin'izany. Matetika ny vidin'ny olana dia 20 000 - Rupee Indonezianina 30 (000-2 dolara izany) - io no "fenitra" haben'ny tsolotra ho an'ny Balisiana iray izay nanadino ny zony tao an-trano. Na izany aza, ny mpizahatany fotsy iray dia hangatahina 3 100 - 000 200 any Indonezia, saingy mety kosa ny miady varotra - azo inoana fa azo atao ny mampihena ny onitra hatrany amin'ny 000 50 ($ 000).
Ny sasany tsy mijanona amin'ny fangatahan'ny polisy mihitsy. Ny mety ho fadim-paniriana handamina ny fanenjehana dia tena ambany, ary raha mahatratra izy dia azonao atao foana ny manambara fa tsy nahatsikaritra ny fomba natorian'ny polisy ny fihazakazanao azy ianao ary niantso karavasy. Miasa matetika io.
Mifandraisa amin'ny departemantan'ny polisy (na iza na iza any Indonezia) amin'ny fanambarana fa nangalatra ny zonao (na efa namoy azy ireo ianao). Amin'ity tranga ity dia hivoaka taratasy fanamarinana ianao hamela anao hivezivezy mandritra ny iray volana. Ny polisy Indoneziana dia tsy manana angon-drindrina iraisana amin'ny fanamarinana toy izany, koa azonao atao matetika ny mametraka an'io antontan-taratasy io. Ireo tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny lalàna dia tsy ho afaka hanamarina ny maha-manan-jo ho anao alohan'ny fitoriana nataonao. Voaporofo ny fanamarinana toy izany.
Vidio fotsiny ny zony sandoka - na indoneziana nasionaly na iraisam-pirenena, mitovy amin'ny firenena rehetra any Azia atsimo atsinanana. Ny polisy misahana ny fifamoivoizana dia tsy manana fototra iraisan'ny zon'olombelona toy izany, ary matetika dia tena azo inoana ny hosoka. Ny olona sasany dia mividy izany zo izany any amin'ny firenena mifanakaiky amin'i Indonezia, ohatra, any Thailandy, amin'ny vidiny mirary.
Saika ny toerana rehetra no andoavana ny parking, eny fa na eo akaikin'ny toeram-pivarotana, tsena alina ary biraon'ny governemanta aza. Ny vidiny dia 1 - 000. Manangona vola amin'ny fidirana na amin'ny fivoahana ny mpikarakara ny parking, eny fa na dia ny famoahana tapakila aza. Ny fijanonana eo akaikin'ny morontsiraka sy ny zava-manintona dia mitentina 2 - 000 any Indonezia. Mpizahatany maro no mandao ny bisikiletany eo akaikin'ny fidirana mankamin'ny faritra karamaina, eo amoron-dalana sy eny akaikin'ny kafe, na dia mbola mijanona amin'ny toerana fitobiana be karama aza ny vazimba teratany.
Ny karama any Bali ary ny fomba hisorohana
Any Bali sy manerana an'i Indonezia, faran'ny kolikoly lehibe no manjaka, izay atrehin'ireo mpizahatany sy mponina eo an-toerana.
Amin'izay fotoana izay, ny polisy any Bali (ary koa ireo teratany rehetra ao amin'ny nosy amin'ny ankapobeny) dia zara raha manao fihetsika tsy mitanila sy masiaka noho ny toetra sy ny toe-tsaina. Tian'izy ireo mikapoka mafy ny lohany izy ireo ary mihifikifi-doha, milaza am-pitoniana ilay mpanao meloka fa tsy maintsy mankany amin'ny pôlisy izy, andefasana taratasy dia havoaka ao, ary ny fiara na ny bisikileta dia haroso ho any amin'ny faritra misy ny sazy. Mazava ho azy fa mahakivy ny ho avy toy izany, indrindra any amin'ny firenen-kafa, saingy ny polisy eo an-toerana dia afaka am-pahatokiana "hipetraka" eny an-toerana. Tena tia kolikoly daholo ny mpiasam-panjakana rehetra. Mandritra izany fotoana izany, vola kely amin'ny $ 5-10 kely dia matetika ho an'ny polisy misahana ny fifamoivoizana. Amin'izay fomba izay, hifampiraharaha ny habetsahan'ny kolikoly, dia mety tsara amin'ny fifanarahana - toy ny amin'ny tsena Bali rehetra.
Matetika, ny mpizahatany no voaloa onitra noho ny tsy fisian'ny fahazoan-dàlana amin'ny mpamily, ary koa ny tsy fahampian'ny satroka rehefa mitaingina bisikileta, noho izany dia tokony hotandremana tsara hatrany ireo teboka ireo, ary ankoatra izany, dia tsy sarotra izany.
Raha misy lozam-pifamoivoizana iray any Bali izay tsy mitondra fahavoazana lehibe amin'ny fahasalaman'ny olona iray, raha ny fitsipika dia tsy misy miantso ny polisy, ny mpandray anjara amin'ny loza dia nanapa-kevitra ny zava-drehetra. Mazava ho azy, afaka miantso polisy ianao, fa matetika (amin'ny tranga fa ny mpandray anjara iray amin'ny lozam-pifamoivoizana dia teratany vahiny ary ny iray hafa dia mponina any an-toerana) dia heverin'izy ireo fa ny vahiny no meloka amin'ny famaritana, na iza na iza no tena meloka. Na dia tsy misy olana amin'ny fahazoan-dàlana mpamily aza ny mpizahatany iray, dia tsy nanitsakitsaka na inona na inona izy ary nisy bandy mafana teo an-toerana tamin'ny bisikileta iray niditra tao aminy tsy nahagaga, fa ilay mpizahatany no meloka amin'ny polisy Indoneziana. Na izany aza, hafa ny olona eto. Indraindray ny olona tsy ampy dia mety hihaona izay, raha misy lozam-pifamoivoizana noho ny fahadisoany, dia hamaly anao amin'ny fanitsiana. Ny polisy mahafatifaty dia afaka mihaona ihany koa. Tsy fahita firy anefa izy io. Raha misy ny fifanolanana dia tsy maintsy ampandreo aloha ny tompon'ilay fiara nampanofainao. Hanampy hamaha ny toe-javatra izy.
Raha sendra lozam-pifamoivoizana ianao, na izany na tsy izany dia tokony hikorontan-tsaina ianao, miezaha handositra ny sehatra, na hanana fihetsika feno herisetra. Ny fihorakorahana sy fianianana any Bali dia fomba tsy mahomby amin'ny fampitana ny toeranao. Raha ny toe-tsaina teratany eo an-toerana, na inona na inona toe-javatra dia tsara kokoa ny milamina sy manaja olona, ​​ao anatin ny lozam-pifamoivoizana.
Raha misy lozam-pifamoivoizana dia manonitra ny fahavoazana nateraky ny fahasalamana ny orinasa fiantohana, saingy misy fepetra roa ho an'ity:
Ny fisian'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamily an'ny firenena amin'ny sokajy izay mifandraika amin'ny karazana fitaterana izay nisy lozam-pifamoivoizana.
Amin'ny fotoan'ny loza, tsy malina ny mpanjifa.
Ny orinasam-piantohana dia tsy maintsy manarona ny vola lany tamin'ny fitsaboana, na iza na iza no tompon'antoka tamin'ny loza. Tsy misy dikany izany na hoe nandeha tany amin'ny polisy ianao na nandeha tany amin'ny toeram-pitsaboana. Na izany na tsy izany dia adidy amin'ny orinasa fitsaboana ny fiantohana.
Mazava ho azy fa olona tsirairay avy ny toe-javatra tsirairay, noho izany dia voafaritra amin'ny fahasimbana manokana ateraky ny fahasalamana sy ny fitaterana ny vokatra niainany. Na izany aza, ny fitsipika ankapobeny dia mitovy amin'ny voalaza etsy ambony.
Raha mikasa ny handeha môtô ianao, dia tokony hiantoka fiantohana miaraka amina zavatra manokana, izay amina orinasa sasany ho "fialan-tsasatra mavitrika", fa ny sasany kosa antsoina hoe "mitaingina moto."